Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Magaca SNM Oo La Masaxo Waxa Laga Dhaxli Doona Midnimada Umadda Somaliland
Magaca SNM Oo La Masaxo Waxa Laga Dhaxli Doona Midnimada Umadda Somaliland
Mar 05, 2016 ANALYSIS 1
Dabayaaqadii qarnigii tagay ee 20-aad waxa dalkii la odhan jiray Somalia ka dilaacay dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo ay jabhado kala duwani hogaaminayaan oo ujeedadooda guud ahayd in xukunka laga tuuro kacaankii uu gadh-wadeenka ka ahaa (AHN) General Maxamed Siyaad Bare.
mudo kooban gudeheed bariga dalka Ethipia waxa laga hirgaliyay fadhiisimo ay gabaadsadaan jabhaduhu oo ay siisay dowlada Ethiopia oo ugu talogashay in ay ku burburiyaan dowladii Soomaaliyeed ee u hogaamiyaha ka ahaa Siyaad Bare, oo ay Ethiopia u arkaysay cadowga ugu wayn ee ay gobolka ku leedahay.
Jabhadii dagaalka la galay dowladii Maxamed Siyaad Bare, waxa ka mid ahaa SSDF, SNM iyo USC, oo dhamaantood ku midaysnaa siidi xukunka looga tuuri lahaa maamulkii kali-taliska ahaa ee uu madaxda ka ahaa Siyaad Bare.
Sadexdan jabhadood in kasta oo mid kastaa dhinaceeda u sheeganaysay in ay xoraynayso dadka Soomaaliyeed oo dhamaystiran isla markaana ay u halgamayso sidii ay xukunka uga tuuri lahayd nimaadka jira ee milatarigu hogaamiyo, dalkana ay gaadhsiin doonto dowlad shacab ah oo madaxda la soo doorto, hadana waxay dhamaantood salka ku hayeen oo gundhig u ahaa qabiilo Soomaaliyeed oo kala duwan.
Jabhada USSDF, oo uu madax ka ahaa (AHN) madaxweynihii hore Somalia C/laahi Yusuf Axmed, waxa horboodayay qabiilka Majeerteen oo C/laahi Yusuf laftiisu ka soo jeeday, USSDF, goobaha ay ka dagaalamaysay waxay u badnaayeen aaga ku beegan gobolada hada loo yaqaan Puntland oo ah deegaanka beesha Majeerteen.
Jabhadii labaad ee hanaqaaday waxay ahayd SMN, oo ay dhiseen niman reer Somaliland ah oo kasoo jeeda dhamaantood beesha Isaaq, laakiin sida ka muuqata magaca jabhada, ujeedadeedu ahayd in ay xoreyso dhamaan goboladii ay ka koobnayd Jamhuuriyadii Soomaaliyeed, waxana hogaanka u hayay mudadii ugu dheerayd madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud(Siilanyo), oo isna ka soo jeeda qabiilka Isaaq.
Ugu danbayn jabhadii USC, oo ka mid ahayd jabhadihii la diriray kacaankii Siyaad Bare waxa ay la mabda’ iyo muunad ahayd SSDF iyo SNM, waxana horjoogayaal ka ahaa oo ay cudooda ku socotay dad ka soo jeeda beesha Hawiye.
Isku soo wada duub oo jabhadii kala duwanaa ee xukunka ka tuuray hogaamiyihii kali-taliska ahaa ee Siyaad Bare oo muddo 21-ka sano ah gacanta ku hayay xukunka Jamhuuriyadii Soomaaliyeed, waxay jabkii iyo burburkii dowlada ka dib fadhiisomo ka dhigteen deegaanadii laga soo abaabulay ee ay dagaanka u ahaayeen beelihii kala hogaaminayay Jabhaduhu.
SSDF, waxay gacanta ku dhigtay gobolka Puntland, USC, waxay qabsatay gobolada koonfureed oo ay caasimadu ku jirto, halka jabhadii SNM, ka qabsatay goboladii waqooyi (Somaliland).
SNM, markii ay dib u qabsatay qaybtii dalka kaga soo hagaagtay waxay markiiba wadahal la qaadatay beelihii soohdin-wadaagta la ahaa beeshi hor kacaysay SNM, waxana lagu guulaystay in shirwayn lagu kulmiyo beelo diriri ka dhaxaysay oo ku kala aragti duwanaa dagaalkii lala galay maamulkii Siyaad Bare.
horaantii sanadkii 1991-kii oo ku beegay taariikhdii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya, waxa magaalada Burco ee gobolka Togdheer ku shiray hogaan dhaqameedka dega dhulkii hore loo odhan jiray British Somaliland Protectorate iyo qaybo ka mid ah hogaankii sare ee jabhadii SMN.
Shirkii Burco, waxa ka soo baxay go’aan aan la filayn oo ahaa in lagu dhawaaqo in goboladii waqooyi ee Somalia ay ka go’aan Somalia inteeda kale, isla markaana loogu yeedho Jamhuuriyada Somaliland.
Markii Burco lagaga dhawaaqay Jamhuuriyada Somaliland waxa hogaanka dalka si ku meel gaadh ah loogu dhiibay gudoomiyihii xiligaa ee SNM C/raxmaan Axmed Cali (tuur) iyada oo loo asteeyay in uu dalka madaxweyne ka ahaado mudo laba sano ah.
Halkaana waxa ka curatay Jamhuuriyada Somaliland oo ilaa hada aan aqoonsi caalami ah ka helin wadamada Caalamka.
Maanta waxa 25-sano laga joogaa xiligii lagu dhawaaqay Somaliland, mudadii 25-ka sano ahayd ee la soo marayna waxu dalku soo maray maraaxil kala duwan oo xumo iyo samo labada laga dheehan karo.
Arimaha togan ee Somaliland lagu majeerto waxa ugu mudan nabad ka islaaxday Somaliland oo ay kaga duwanaatay Somalia inteeda.
Somailand waxa kale oo ay ku talaabsatay hirgelinta maamulka casriga ah iyada oo dalka laga sameeyay doorashooyin qof iyo cod ah oo aan ka dhicin ilaa hada meel kale oo ka mid ah Jamhuuriyadii Soomaaliyeed.
Somaliland waxay samaysatay Calan, Astaan iyo lacag u gaar ah sidoo kale waxa ay leedahay Passport gaar ah oo ay xadidanyihiin wadamada lagu tagi karaa dhamaan astaamahana waxay muujinayaan sida ay Somaliland uga duwantahay Somalia.
Hadadaba hadii shirkii Burco ee lagu sameeyay Somaliland, ay beeluhu ku heshiiyay in dib loola soo noqdo xoriyadii 26 june 1960-kii laga qaatay Ingiriiska ee maalmo ka dib ay ku midoobeen labadii Gobol ee Koonfur iyo Waqooyi, waxaan marnaba raali laga wada ahayn oo aan heshiis lagu ahayn isticmaalka magaca jabhadii SNM, oo gaar u ahayd beesha Isaaq.
Murtida maqaalka: Somaliland si ay u sii jirto oo ay beelaha wada degaa uga midaysnaadaan lahaanshaheeda waxa lagamamaarmaan ah in la raadiyo xal guud ama wax dadka oo dhan midayn kara oo aan cidi gaar u yeelan sida calanka iyo lacagtaba aanay cidi gaar ugu lahayn, waa in laga fikiraa sifihii lagu heli lahaa wadaag guud oo dhex mara wiilka jooga Lowyacdo oo galbeedka Awdal ah iyo gabadha jooga Dhahar oo ku taal bariga gobolka Sanaag.
Gabogabo: Sida kaliya ee lagu heli karo midnimo guud oo dhex marta dadka ku dhaqan Somaliland waxay ka bilaabmaysaa iyada oo la iska ilaabo dhamaan waxa dib u xasuusin kara dadka taariikhihii qalafsanaa ee bulshada soomaray iyo dagaaladii sokeeye ee dadka kala irdheeyay.
Si Somaliland nabad ah loo helo waa in aan dadka muwaadiniinta ah la kala saraysiin ee ay yeeshaan xuquuq siman, sidoo kalena ay dheefta dalkana u qaybsadaan si cadaalad ah.
Si Somaliland xasiloon loo helo waa in si buuxda loo masaxaa taariikhaha aan la wadaagin iyo naanaysaha dadka kala fogeeya ee keeni kara in mar kale bulshadu isku dhacdo, waana in laga tanaasulaa xusaska loo sameeyo muwaadiniinta ku nafwaayay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ee loogu yeedho mujaahidiinta maadaama oo dadka oo dhami aanay u aqoonsanayn mujaahidiin.
Waa in laabta lagu hayaa in mujaahid kasta oo la sheego oo jooga Somaliland uu yahay mid ku mujaahiday ama magaca mujaahidnimo ku qaatay qof walaalkii ah oo Soomaali ah oo uu naftiisa gooyay sababta ku kaliftay in uu talaabadaa qaadaa gar iyo gardaro miday doontoba ha noqotee.
Hadii aan ahay mujaahid hebel hebel oo ka soo jeeda gobolka Togdheer ama Maroodijeex darajada mujaahidnimo ee aan wataa ma farxad galinayso muwaadinka reer Somaliland ee jooga Awdal ama Sool.
Wiilka reer Awdal marka dib looga sheekeeyo taariikhdii dalka soo martay iyo dagaaladii sokeeye ee dalka kasoo dhacay waxa adeerkii ama edadii u sheegaan in ay dagaalo qadhaadh oo lagu le’day ay dhex mareen Beelaha dhexe ee Somaliland isla markaana lagu waayay hebel iyo helaayo oo qaraabo dhow la ahayd, markaa ninka Mujaahidka sheegta ee ka tirsan beesha dhexe uu maqlo wiilka reer Awdal waxa uu xaq u leeyahay in uu u arko cadowgiisa koowaad in uu raali ka noqdo hadalkeed daaye mar kasta oo uu meel fagaare ah ka hadlo Mujaahid ku sheegu oo uu xuso wax ku saabsan dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay waxa damqanaya boog ku dhawayd in ay bogsato oo ku taal wiilka reer Awdal.
Sidoo kale wiilka jooga deegaanka Buuhoodle ee gobolka Togdheer magaca SNM, waxa uu u yaqaan in uu yahay magac u gaar ah beesha Isaaq, oo isagu aanu ku jirin dhib iyo dheef midkay doontaba ha lahaatee.
Marka aad joogto gobolada dhexe ee Somaliland, dhawaqa SNM, waa mid dhagaha dadka soo jiita oo ay u arkaan in uu yahay urur xaq u dirir ah oo sababtiisa iyo halgankii qadhaadhaa ee uu la soo galay dowladii kacaanka ay ku xorowday Somaliland.
Beesha dhexe ee Somaliland waxa la fudud in qof loogu yeedho naanaysta (Mujaahid) oo badanaa loo adeegsado dadka in uun ku luglahaa dagaaladii ay SNM, ku xoraysay Somaliland, qof kastaana waxa uu kuu sheegayaa in ugu yaraan ruux qoyskiisa ka tirsani uu ku naf waayay oo uu sahayday dagaalkii qadhaadhaa ee lala galay Xukunkii qalafsanaa ee Siyaad Bare.
Waa run oo si loo helo xoriyad taam ah waxa loo waayay nafo badan oo karaamo iyo qiimo ku lahaa bulshada, laakiin maanta lama joogo maalintii qadhaadhayd ee waxa la joogo maalin ka duwan waxana muhiim in la raadiyo wax dadka wada raali galiya, oo laga dhadhansan karo wadaniyad iyo cadaalad, si ay mudooyinka soo socda u midowdo aragtida dadka reer Somaliland.
Kala duwanaanshaha shacbi ee Somaliland ka jira si loo mideeyo waxa muhiib ah in gabi ahaanba xidida loo siibo oo la masaxo magacoodana la ilaawo jabhadihii ka soo dagaalamay dalka oo ay ugu horeyso SNM, isla markaana dadkii ka tirsanaa ururka aan loogu yeedhin mujaahidiin si loo dhowro quluubta iyo wada jirka dalka.
Waa in aan mudnaan la kala siin muwaadinka dagaalka sokeeye galay ee ku kala nool gobolada Awdal iyo Maroodijeex ama Sool iyo Togdheer.
Hadii muwaadinka reer Somaliland ee kasoo jeeda gobolada dhexe kana mid ahaa SNM, loogu yeedho mujaahid maxaa diiday in muwaadinka reer Somaliland ku nool gobolka Awdal isna loogu yeedho Mujaahid.
Inta cadaalad daro kursi iyo mid karaamo ay ka jirto Somaliland, waxa hubaal ah in aan la arki doonin midnimo loo dhanyahay oo ka hana qaada gayiga oo dhan, waxana xaqiiqo ah in dadka Somaliland wada degaa aanay xiligan ka midaysnayn in lagu sii jiro xaaladii lagu jiray 25-kii sano ee lasoo dhaafay, marka aad sababta hoos ugu daadagtana waxa kuu cadaanaysa in dadkii la kala sareysiiay oo qaarna darajo loo yeelay qolana laga dhigay (second Citizen) ama muwaadinka darajada labaad.
Ceeb waxa inoogu filan in dad wada dhashay la kala saaro oo qolo la siiyo xuquuqda dalka oo dhan qolada kalena laga dhigo muwaadinka labaad (second Citizen), iyada oo si muuqata loo kala badsanayo awooda dowladnimo, sababo la xidhiidha oo salka ku haya ururkii xoriyad doonka ahaa ee SNM iyo qiyaaso aan la aqoon cida jaangoysay oo lagu saleeyo in Beeluhu kala badan yihiin.
Ugu danbayn si loo helo dal iyo dad midaysan waa in la kala doortaa magaca Jabhadii SNM, iyo magaca Jamhuuriyada Somaliland, hadii laga tanaasuli waayo magaca SNM, oo wali dad ku sii dhololaan hadalhayntiisa iyo karaamayntiisa ha ogaadaan waxay fogeeyeen midnimadii dalka Somaliland, wadajirkii dadka waxanay god madow ku ridayaan aqoonsiga laga doonayo Somalia iyo beesha caalamka oo wadajira.
Ha ogaado qofka magaca SNM, ku faanayaa in uu cadho galinayo muwaadin kale oo walaalkii ah oo jooga gobol kale oo Somaliland, ka mid ah, Hana laga waantoobo in Mujaahid qof loogu yeedho iyada oo aan la garanayn cida uu ku shahaado qaatay iyo ayaada cadaysay mujaahidnimadiisa midna.
dareena aan u yeelano dhibta ka dhalan karta laba muwaadin oo dagaal qabiil fooda isku daray in midna la darajeeyo oo loogu yeedho Mujaahid, ka kalana magaciisa la xusi waayo ceeb iyo colaad wax aan ahayn oo laga dhaxli doonaa ma jirto.
Qalinkii Maxamed Cumar Jibriil
Awdal, British Somaliland Protectorate, Maxamed Siyaad Bare, snm
Film Gaaban:- HOOYO Waa Filim oo Ka Hadlaya Caqabadaha ay la Kulmaan Haweenka ay Hore... Daawo Qaraxyo Ka Dhacay Biriij Ku Yaala Dalka Maraykanka Oo Laga Guurayo Isla Markaana Dib U Habayn Lagu Samaynayo
One thought on “Magaca SNM Oo La Masaxo Waxa Laga Dhaxli Doona Midnimada Umadda Somaliland”
Gorof 03/10/2016 at 4:00 pm
wa run. Anaa taa kugu raacsan. SNM magaceeda dhowaan buu iska baabi’i. Immikiba xoog ma leh. Yaan waxaan weyneyn la buunbuunin. Samroon ama Somalialnd ha noqoto ama si toos haw tidhaado Soomaliweyn bannu nahay. Xusuusin: Dowlad kasta oo Soomaliya HAL wasiir ka badan weligood may siin Samaroon. HAL WASIIR. FACT. Dhulbahante oo aan bah habar Muuse leekeyn uguyaraan saddex wasiir bay sin jireen. FACT. Habra Jeclo saadeex uu madexweynu ku-xigeen ku jiro ayaey ku lahaayeen dowladii siyaad Barre, samaroonna Bile Rabbiile oo keliya.
Dalak keliya ee Samaroon xoog iyo ixctiraam iyo buruud ku leeyahay waa Somaliland